खासखबरका लागि खासखबर
गीतकार रामचन्द्र राईको सिर्जनशीलता
गीतकार रामचन्द्र राई (रविन) हङकङमा बसेर जागिरे जीवन बिताईरहनु भए पनि आफू हुर्के बढेको देश नेपाललाई कहिल्यै भुल्नुभएको छैन । त्यसैले गीत लेखनमा निरन्तर रुपमा लागिरहनुभएको छ । उहाँले मनको प्यासी गीति एल्बम र पिरतीको रन्को भि.सि.डी. एल्बम बजारमा ल्याईसक्नुभएको छ । उहाँको शब्दमा माया प्रेम घात प्रतिघात र यथार्थ जिन्दगीका चित्रहरु भेटिन्छन् ।
मीठो विम्ब र सील्प प्रयोगमा उहाँ माहिर हुनुहुन्छ । उहाँको शब्द रचनामा सत्यकला राई कला राई सरला राई र पार्वती राई जस्ता गायिकाहरुको एल्बममा गीतहरु समाबेश भईसकेका छन् । राजेशपायल राईको बहु-प्रतिक्षित एल्बम राई इज किङ मा समेत उहाँको शब्द रचनाको गीत चाँडै श्रोताहरुले सुन्न पाउनेछन् । उहाँको साहित्यिक सफलताको लागि खासखबर अनलाईन शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
Posted by khaskhabar at 5:14 AM No comments:
झन् चर्कियो माओवादी आन्दोलन
काठमाडौं । एकिकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो विरोधको कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा लैजाने निर्णय गरेको छ । प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले चालेको कदम सच्याउन माग गर्दै अहिलेसम्म राजधानी केन्द्रीत रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीको आन्दोलन देशव्यापी रुपमा हुने भएपछि व्यापक चर्किने भएको छ । सरकारद्धारा अवकाश दिइएका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई राष्ट्रपति यादवले निरन्तर काम गर्न दिएको निर्देशन असंवैधानिक कदम भएको ठहर गरी एकीकृत माओवादीले गर्दै आएको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन देशव्यापी बनाउने निर्णय भएको हो । भर्खरै बसेको माओवादी पोलिटब्युरोको बैठकले यस्तो निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सडक र सदनबाट संघर्ष गरिरहने बताइएको छ । पोलिटब्यूरो सदस्य विश्वभक्त दुवाल 'आहूति' का अनुसार नागरिक सर्वोच्चता कायम राख्न शान्तिप्रकि्रया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नयाँ संविधान निर्माण गर्न सेना समायोजन गर्न्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि शान्तिपूर्ण संधर्ष अगाडि बढाउन सदस्यहरुले सुझाब दिएका छन् ।
Posted by khaskhabar at 4:38 AM No comments:
देश छिट्टै प्रष्ट धु्रवीकरणमा जाने निश्चित छ
देशको वर्तमान बदलिदो राजनीतिक अवस्थालाई धेरैले आकस्मिक घटनाको रुपमा हेरे पनि यो घटना देशलाई अघि बढाउने कि पछाडि धकेल्ने भन्ने दुई कित्ताको संघर्षको चरम उत्कर्ष मात्र हो । एक पक्षलॆ पुरानै राज्यव्यवस्था सैनिक अधिनायकवाद र अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको प्रतिनिधित्व गर्द्रछ भने अर्को पक्ष आमुल परिवर्तन जनाताको सर्वौच्चता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको खातिर संघर्षरत छ । यो संगीन घडिमा तटस्थ बस्नु भनेको खहरे भेलमा नदीको बीचमा रहेको मुढो बन्नु जस्तै हो जुन खाखिरमा बगेरै जान्छ । तसर्थ आपुूलाई अग्रगमनको पक्षमा उभ्याउनु र सम्पूर्ण देशी विदेशी षड्यन्त्रको भण्डाफोर गरेर देशलाई दीर्घकालीन निकास दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता बन्न गएको छ । यस घडिमा झ्यालढोका थुनेर केही थाहा नपाएजस्तै गर्नु भनेको आखिरमा प्रतिगामीहरुलाई सहयोग पुर् याउनु नै हो । कुनै समय कार्यकारी राष्ट्रपति राख्ने विषयको विरोध गर्दै रातभरि गणतन्त्र घोषणा समेत रोकेर घृणित खेल खेल्ने कांग्रेस अहिले संविधानले आलङ्कारिक भूमिका मात्र दिएको राष्ट्रपतिलाई उचालेर देशको परिवर्तनको रथलाई भिरालोबाट खसाल्ने कुचेष्टा गर्दैछ । एमालेले प्रधानमन्त्रीको ताजा हड्डी आपुूतिर फ्याँकिदिएपछि शाही कालकै रवैयामा कांग्रेसको राष्ट्रविरोधी कदमलाई सघाउ पुर् याउँदै आएको छ । यसबाट के प्रष्ट भएको छ भने कांग्रेस र एमाले भनेको कुकुरको बाङ्गो पुच्छर जस्तै हुन् जसलाई जनताले जतिपटक सुधि्रने मौका दिएपनि सधैं देशलाई अस्थिरता र अँन्धकारको भूमरीमा फसाउने गर्दछन् । कांग्रेस र एमाले भित्रको क्रान्तिकारीहरु माथि प्रतिगामीहरु हावी हुनुले अब देश छिट्टै प्रष्ट धु्रवीकरण जाने निश्चित प्राय ः छ । देशलाई आमुल परिवर्तन गराउन र श्रमजिवी जनताको सर्वोच्चता कायम गर्न हजारौं जनताले आफ्ना बलिदानी दिए । पछिल्ला परिवर्तनको मूल अस्त्र ः जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादीलाई जनताले संविधानसभाको चुनावमा जिताएर पठाए पनि थर्कमान भएको देशी विदेशी प्रतिकि्रयावादीहरु कुनै पनि हालतमा माओवादीले राम्रा काम गरोस् भन्ने चाहदैनन् । त्यसैले जनआन्दोलनको दोषी तथा पूर्व सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले कारबाही गरेको एक दिन नबित्दै आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले ज्ञानेन्द्र शैलीमा संविधान मिचेर रातविरात उनकेा पुनर्बहाली गर्नुले प्रतिगामीहरु कुन हदसम्म जान सक्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट देखाएको छ । राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक आदेश फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चलिरहँदा समेत कानमा तेल हालेर बस्नुले राष्ट्रपनि जनताका हुन् कि प्रतिकि्रयावादीको भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ । नयाँ संंविधान मार्पुत् श्रमजिवी जनताले आफ्ना अधिकार प्राप्त गरुन् भन्ने कुरा देशका प्रतिकि्रयावादीहरुलाई मन परेको छैन भने माओवादीले आफ्ना अगाडि घुँडा नटेकेकोमा विदेशी प्रतिगामीहरु बौलाएका छन् । त्यसैले देशी विदेशी बौलाहाहरुको मिलेमतोमा देशलाई घोर अन्धकारतिर धकेल्ने र बन्दुकको आडमा उही पुरानो सत्ता ब्युँताउने चलखेल शुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा गरेका अभिव्यक्तिबाट पनि यो कुरा छर्लङ्ग भएको छ । यदि उनलाई आरोप लगाइए जस्तै उनी पनि विदेशी मतियार भएको भए प्रधानमन्त्रीले विदेशीको अगाडि घुँडा टेकेर अरु १०/१५ वर्ष आरामले साशन चलाउन सक्ने थिए । तर नेपाली स्वाभिमान र जनताको सर्वोच्चताको निम्ति उनको यो राजिनामा देशी विदेशी प्रतिगामीहरुको निम्ति ठूलो चड्कन सावित भएको छ । यो राजिनामाको महत्व इतिहासले अवश्य मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । जनताको विरोधमा लागेर सैनिक सर्वोच्चता र विदेशी हस्तक्षेप स्वीकारेर क्षणित पदका लागि दगुरिरहेका दलहरुको यदि छिट्टै आँखा नखुल्ने हो भने उनीहरुलाई जनाताले सिधै आर्यघाटमा लगेर आँखा खुलाउने छन् । यदि यतिबेला म फेरि सुधि्रन्छु भनेर कसैले भन्न भने पनि अब नेपाली जनता अरु धैर्य गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले प्रतिगमनको मतियार बनिरहेका दलहरुको समयमै आँखा खुले उनीहरुलाई पनि राम्रो र देश र जनतालाई पनि राम्रो हुने थियो । अन्यथा इतिहासको सजायबाट कोही बच्न पाउने छैन
Posted by khaskhabar at 4:36 AM No comments:
जोखिममा बाँच्दैछन् यातायात मजदुर
यातायात मजदुरहरु कतिसम्म जोखिम जीवन गुजारिरहेका छन् भन्ने कुरा भर्खरैको घटनालाई उदाहरणको रुपमा लिँदामात्रै पनि स्पष्ट हुन्छ । गत आइतबार ललितपुरको एकान्तकुनास्थित चक्रपथमा माइक्रो चलाईरहेको अवस्थामा सडक छेउको रुख ढलेर एक जना माइक्रो चालकको घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो । त्ौ पनि सम्बद्ध निकायले यस घटनालाई खासै चासोको साथ हेरिएको पाइएन । सडक वरपर भएका ठूला-ठूला रुखहरु पनि सवारी चालकका लागि खतरनाक नै बन्ने गरेको छ । यद्यपि यो पहिले घटना भने अवश्य होइन । यसको निराकरणका लागि जिम्मेवार निकायबाट कुनै तदारुकता अपनाएको पाइँदैन । त्यसो त नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका अव्यवस्थित सडक पनि सवारी चालकका लागि जोखिमपूर्ण सिद्ध हुँदै आएको छ । साँगुरो सडक कै कारण उनीहरुलाई समस्या खडा हुने गरेको छ । छिन छिनमा हुने सवारी जामले विभिन्न समस्या खडा गरेको पाइन्छ । जसको कारण सोचे अनुरुप टिप गर्न नपाई उनीहरुको कमाई या भनौं रोजीरोटी मै समस्या खडा हुने गरेको छ । साँगुरो सडककै कारण सडक दुर्घटना पनि हुने गरेको छ जसको दोषी चालकलाई नै देखाइन्छ । यसबाट पनि उनीहरुको जीवन शैलीमा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ । आर्थिक कठिनाई उत्पन्न गराउने कारक तत्वको रुपमा रहेको छ-विद्यार्थी सहुलियत । सही विद्यार्थीका लागि यो राम्रो योजना हो तर अहिले प्रमुख रुपमा सवारी चालकहरुका लागि विधार्थी सहुलियत अन्र्तगत दिनुपर्ने छुटमा सहि व्यवस्था नहुनुले समस्या सृजना गरेको छ । नक्कली विद्यार्थी परिचयपत्र बनाएर जा कोहिले विद्यार्थी सहुलियत माग गर्दा आवश्यक भाडा उठने गरेको पाइँदैन । गैर विधार्थी्रहरुलाई पनि यसरी सहुलियत दिनुपर्ने अवस्थाको कारण पनि उनीहरुमा आर्थिक समस्या सृजना हुने गरेको छ । यसका लागि सही विद्यार्थीले मात्र छुट पाउने वैज्ञानिक व्यवस्था हुनु जरुरी छ । जसका लागि नक्कली विद्यार्थी परिचयपत्र बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । देश निर्माणंका लागि मजदुरहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । मजदुरहरुको हकहित संरक्षण गरेर मजदुरको अधिकार सुरक्षित हुने किसिमको जनसंविधान बन्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता छ । अब बन्ने संविधानमा मजदुरहरुको सम्पूर्ण समस्याहरुलाई मध्य नजर गरी संविधानको निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि मजदुरहरुको हितमा लागेका विभिन्न्न यूनियन तथा संघ-सस्थाहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्दछ ।
Posted by khaskhabar at 4:34 AM No comments:
राष्ट्रभन्दा भैंसी प्यारो ?
मुलुक अहिले अत्यन्त संवेदनशील घडीमा उभिएको छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा गुजि्ररहेको यो देशलाई पार लगाउनुको साटो विदेशी दलालहरुको चंगुलमा फसेर राजनीतिक कि्रडास्थल बनाइनुले गर्दा नै देशले यो अवस्था बेहोर्नुपरेको हो । यस देशलाई कानुनी राज्य भन्ने कि नभन्ने द्धिविधा उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो पटक राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको सेनापति प्रकरणमा भएको गतिविधिले यो शंका उब्जाएको छ । जन आन्दोलनका दोषी रुक्माङगत कटवाललाई पदमुक्त गर्ने सरकारी योजनालाई असफल पार्न खोज्ने विदेशी शक्ति र उसको इशारामा नाच्ने देशी प्रतिगमनकारीहरुलाई धुलो चटाउँदै अन्नतः सरकारले कटवाललाई कारवाही गरेरै छाड्यो । यसका लागि एनेकपा माओवादी सरकारलाई साधुवाद दिनैपर्छ नेपाली जनताले । विडम्बना गरिमामय पदमा रहेर सम्मानित मानिएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले अरुकै इशारामा सरकारी निर्णयलाई धोती लगाउदै समानान्तर सरकारको स्थिति सिर्जना गरी कटवाललाई पुर्नवहालीको पत्र पठाएर तानाशाही ज्ञानेन्द्रको झ-झल्को दिलाए । उनले नेपाली आस्था र आदर्शले मान्दै आएको सम्मानित राष्ट्रपति पदको त्यतिबेला नै धज्जी उडाए । अहिलेसम्म निस्कंलक भएर परिचित आफ्नो छवि पनि धुलोमै मिलाए । रक्षक नै भक्षक भएको यसै दिनदेखि देशमा रडाको मच्चिएको छ । गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यहि विषयलाई लिएर राजिनामा दिएका छन् र अहिले देशमा राजनैतिक जोड घटाउको स्थिति सृजना भएको छ । यो मुलुककै लागि र्दुभाग्य हो । यता राष्ट्रपतिको कदम फिर्ता नलिएसम्म सडक र सदनबाट आन्दोलन जारी राखिने भएको छ । अर्कोतिर राजनीतिक निकास खोज्नुको साटो संविधानसभाको हरुवा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर आ-आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न अहोरात्र लागिदैछ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार गठन गर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन र यो प्रायः असम्भव पनि छ । उता राष्ट्रपति आफ्नो गल्तीको महसुश गर्नको साटो भैंसी चराउन गाउँ जाने बाटो नै सुगम देख्दैछन् । बुद्धिजिवी नागरिक समाज तथा आम नेपालीले उनको कदमलाई आत्माघाती भनेर ठहर गर्दा पनि उनीले सच्चिने मेसो देखाएका छैनन् । यतिबेला भीरमा जाने गाईलाई राम्…राम्…। भन्न बाहेक उनलाई भन्नु केही छैन । मुलुकको अहिले तड्कारो अवस्था भन्नु नै समय सीमाभित्र संविधान निर्माण गर्नु नै हो । यसबेला सहमतिको राजनीति भन्दा अर्को विकल्प नै छैन । राष्ट्रपतिले देशको निकास चाहेका छन् भने सच्चिनुपर्छ । सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढनु नै सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् ।
Posted by khaskhabar at 4:29 AM No comments:
नाङ्गो भारतीय हस्तक्षेप
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिलाई आन्तरिक हावापानीले भन्दा पनि बाह्य वातावरणले बढीप्रभाव पारेको यथार्थ हाम्रो सामु स्पष्ट रुपमा छर्लङग देखिएको छ । विदेशी शक्तिहरुको नाम िलंदा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको नाम अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । यसको पछि पछि अमेरिका पनि आउने गरेको छ । जसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई उथलपुथल नै बनाउने गरेको पाइन्छ । वाहिर भन्ने बेलामा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगरिने भने पनि ब्यावहारमा भने यसको ठीक उल्टो देखिएको छ । प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वाललाई बर्खास्त गर्नेबेलामा भारतीय राजदुत राकेश सुदले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पाँच÷पाँच पटक भेट गरे । हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि यति धेरै सस्तो भइदिए कि उनले भारतीय राजदुतलाई जति पटक भन्यो त्यति नै पटक भेट गरेर आफनो कद आफै घटाए । तर पछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनले भन्न भ्याए ुनेपालको प्रधानमन्त्री त भारतको मुख्यमन्त्री भन्दा पनि तल्लो स्तरको हुदोरहेछ ।ु एक टिप्पणीकारका अनुसार ुयदि नेपालको प्रधानमन्त्रीले आपुनो कदलाई जोगाइराख्ने हो भने विदेशी कुटनीतिज्ञहरुसँग भेट गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिएर मात्रै भेट गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्छ तब मात्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको इज्जत रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजदुत सुदसँग भेट गर्नुमा उहाँले जे भने पनि कट्वाललाई कार्वाही गरिसकेपछि पनि आफू सत्तामा टिकिरहन पाइन्छ कि भन्ने आशाले नै कुटनीतिज्ञ मर्यादालाई मिचेर भेट गरेका हुन् । यो कुरा राजीनामा पछि उहाँले ओकेल्नुमा त्यसको कुनै तुक छैन बरु यसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कदलाई विदेशीको सामु निहुरिएको सावित गरेको कुरा टिप्पणीकारले खासखबरलाई बताउन भ्याए । नेपालको आन्तरिक मामलामा हात हालेर भारतले आपुनो छिमेकीको सामु असल छिमेकी भएर प्रमाणित गर्नुभन्दा पनि ठूलो माछाले सानो माछालाई खाने प्रवृत्ति देखाएको छ । नेपाल सरकारले गर्ने कुनैपनि निर्णयमा भारतले चासो देखाउनु र सकेसम्म त्यो निर्णय भारतकै पक्षमा पक्षपोषण होस् भन्ने भारत चाहन्छ । नेपालले पनि भारतलाई कुटनीतिक मर्यादामा रहनका लागि स्पष्ट भन्न सक्दैन किनभने नेपाली राजनीतिज्ञहरु पनि भारतको आशिर्वादमै भएपनि प्रधानमन्त्री बन्न लालायित देखिएका छन् । हाम्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरा गर्ने हो भने उहाँले आफ्नो युद्धकालको धेरै समय त भारतको नयाँ दिल्लीमा विताउनु भएको थियो । नेपालको जनयुद्ध भनिएपनि केही रुपमा भारतले नेपाललाई कम्जोर बनाउनकै लागि भारतको स्पष्ट समर्थन थियो । र त माओवादीले भारत भएर हतियार खरिद गरेका थिए । युद्धकालमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतीय मोबाइल समेत प्रयोग गरेबाट यो प्रमाणित भएको छ । अब यहाँनिर के बुझनुपर्छ भने भारतकै आशिर्वादले सत्तामा पुगेका माओवादीले आफ्नो कार्यकर्ताको दबाव नभएको भए कट््टवाललाई बर्खास्त गर्ने आँट गर्ने थिएन र माओवादी सत्तामै रहने थियो भनी एक माओवादीकै भूतपूर्व कार्यकर्ताले बताए । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिदेखि लिएर माओवादीको सरकार गठन ताकासम्म माओवादीले भारतकै आशिर्वाद पाएपनि पछि कार्यकर्ताको बोझ थाम्न नसकेपछि कटट्वाललाई कार्वाही गरेरै छाडेपनि भारतको आशिर्वाद नपाएको वा दबावकै कारणले राजीनामा दिन बाध्य पारियो । यसका लागि राजदुत दिल्लीसम्म पुगेर समर्थन जुटाए र अन्ततः प्रचण्डले सत्ताको कुसर्ी छाड्नु पर् यो । नेपालमा अहिलेसम्म जे जति सरकार बने पनि सबै सरकारले भारतको स्वार्थ बमोजिम नचलेको इतिहास भेट्न गार् हो छ । यसको अर्थ हुन्छ राष्ट्रवादी नेताहरु प्रधानमन्त्री भएकै छैनन् । प्रचण्डले राजीनामा दिँदा विदेशी शक्तिहरुको चलखेलको कुरा गरेपनि भारतको नाम लिन डराए । उनले पछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हिन्दी भाषाको मीठो प्रयोग गरेर फेरि पनि दिल्लीलाई खुशी बनाउन भने हाम्रा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछि परेनन् ।
Posted by khaskhabar at 4:22 AM No comments:
गोर्खाली छुट्ने तरखरमा, प्रहरी र न्यायलय बिकेकै हुन् त ?
काठमाडौं । उपत्यकामा प्रहरी प्रशासनको बलियो उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि उपत्यकालाई ुडनु हरुले नै राज्य गरिरहेको सुन्दा जो सुकैलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ । यिनै मध्ये ३९ बर्षीय डन ुराजु गोर्खालीु उर्फ ंराजेन्द्रबहादुर गोर्खाली अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी पक्राउ पर्ने बित्तिकै उनी आफू कपडा व्यावसायी हुँ भनेर प्रहरीलाई बताए पनि उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु त्यसमा विश्वास गर्दैनन् । यसमा प्रहरीका एक खेमाले पनि उनीमाथि विश्वास गरिरहेको छैन ।
प्रहरीका अनुसार उनी सुन्धारास्थित बेबीलोन डिस्कोका साचालक राकेश लिम्बूको हत्या अभियोगमा मोस्ट वान्टेड थिए । उनी विरुद्ध हत्याको अभियोगमा २०५९ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यहि समयदेखि फरार रहेका गोर्खालीको नाममा अदालतले पटक-पटक म्याद तामेल गरेपनि उनी अदालतमा हाजिर भएका थिएनन ।
स्रोतका अनुसार गोर्खालीले २०५९ साल माघ ३ गते दरबारमार्ग स्थित रोयल डिस्कोमा राकेश लिम्बूलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए । त्यस समयमा खुकुरी सहित अन्य धारिलो हतियार प्रयोग भएको थियो । त्यही घटनामा राजेश लेप्चा र सुनिल भन्ने लिम्बूका सहयोगीहरुलाई समेत खुकुरी प्रहार गरिएकोमा उनीहरु घाइते भएका थिए । आजसम्म पनि उनीहरुको हात राम्ररी चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने सो घटनालाई प्रत्यक्ष रुपमा देखेका थिए राजु बोगटीले ।
यसैक्रममा उनी २०६५ साल माघ १० गते विहान ११ बजेतिर आपुना वकिलहरुका साथ काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका थिए । अदालतमा न्यायधीश हेमराज पन्तको एकल इजलासमा गोर्खालीको बयान लिइएको थियो । बयानको क्रममा गोर्खालीले आफू २०५९ माघ १ गते नै गोरखा एअरलाइन्स्को टिकट लिएर काठमाडौंबाट सिमरा हुँदै वीरगाज गएको माघ ३ गते आफू बिरामी भएर कलैया अस्पतालको आकस्मिक कक्षामा भर्ना भएको माघ १ गते नै रोयल डिस्कोको सम्पूर्ण हिसाब किताबको जिम्मेवारी उमेश गुरुङ र महेश्वर डंगोललाई जिम्मा दिएको भन्ने झुठो विवरण अदालत समक्ष पेश गरेका थिए । आठ बर्षपछि मात्र अदालत पुगेका गोर्खालीलाई अदालतले यति लामो समयसम्म कहाँ गएका थियौ काठमाडौं कहिले फर्केका थियौं भन्ने प्रश्न सम्म सोधेको पाइदैन । मुद्दाको सिलसिलामा विपक्षीलाई अदालतले सोधेको पाइएको छैन ।
माघ १७ मा उनलाई हाजिर गराएर बयान गराउने र मुद्दाको बहस गर्ने काम समेत त्यसै दिन सकिएको थियो । सहायक जिल्ला अधिवक्ता अनीलकुमार शर्मा र गोर्खालीका दुई कानून ब्यवसायीले उक्त मुद्दामा बहस गरेका थिए । अदालत स्रोतका अनुसार सामान्यतः एकै दिन बयान बहस र फैसला विरलै हुने गर्दछ । तैपनि उनलाई एकैदिन बयान लिई एकै दिन बहस गराएर छाडेको थियो ।
लिम्बू हत्या प्रकरणमा दोषी ठहरिएका उमेश गुरुङ अहिले थुनामा छन् । उनी गोर्खालीका दाहिने हात थिए उनले दिएको बयान अनुसार लिम्बूलाई गोर्खालीले चलाएकै गोलीबाट मृत्यु भएको साविती बयान दिएका छन् । यति हुँदा हुदैपनि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीशले एअरलाइन्स्को टिकटका बारेमा पछि बुझेर इजलासमा पेश गर्नू र अस्पतालको भर्ना रसिदबारे पनि पछि जे ठहर्छ त्यही गर्नू भन्ने आदेश दिएर कानूनी राज्यको उपहास गरेको देखिएको छ ।
अदालतले गोर्खालीको उक्त झुठो प्रमाण पेश गरेकै आधारमा रातारात सबै तयारी गरेर एकै दिन बयान बहस र साधारण तारिखमा रिहा गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो अति नै न्यायपूर्ण नभएको मृतक लिम्बूका आफन्तहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार आफूहरु न्याय पाउने आशामा अदालत गएपनि अदालतले जसको पैसा उसैलाई सफाई दिएको आरोप न्यायधीशमाथि लगाएका छन् ।
प्रहरीले लिम्बूकै हत्याप्रकरण अभियोगमा पक्राउ गरेको भएपनि अदालतले गोर्खाली साधारण तारेखमा रिहा भएको जवाफ दिएपछि प्रहरीपनि अलमल्ल भएको छ । प्रहरीले दर्ता गराएको अभियोगमा प्रहरीलाई जानकारी बिना नै कसरी साधारण तारेखमा गोर्खाली रिहा भए यो प्रश्न अदालत सामू तेसर्िएको छ ।
एक स्रोतका अनुसार गोर्खालीका ग्याङहरुले बेबीलोन डिस्कोमा हप्ता मागेपनि दिन इन्कार गरेकोले लिम्बूको ज्यान गएको हो । साथै गोर्खालीले उक्त डिस्कोलाई आफ्नो बनाउन चाहन्थे । तर दुबईमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले डिस्को खोलेका लिम्बूले उक्त कुरा स्वीकार गरेका थिएनन् । लिम्बूले शेयर स्वीकार नगरेपनि यसै विषयमा उनीहरुको बाकयुद्ध चलेको थियो । उनलाई सरसल्लाहको लागि रोयल डिस्कोमा बोलाईएको र तयारी हालतमा रहेका उनीहरुले खुकुरी र गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
राकेश लिम्बू करातेका राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुन् । अब यहाँनिर के प्रंश्न उठेको छ भने राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीको ज्यान त सुरक्षित छैन भने अन्य साधारण जनताको सुरक्षा कसले गर्ने
स्मरणरहोस् रोयल डिस्को पनि राजु गोर्खालीले बिना लगानीमा धम्कीकै भरमा हात पारेका थिए भनेर उनी निकट एक स्रोतले नाम नबताउने शर्तमा उल्लेख गरेका छन् ।
गोर्खालीले गोली हानेको सबुद बयान प्रहरी र अदालत सँग छ गोली र खुकुरी प्रहार गरेको प्रत्यक्ष देख्नेहरु पनि मौजुदा रहेको अवस्थामा समेत अदालतले कुनैपनि छानवीन नगरी हचुवाको भरमा हत्याको जघन्य आरोप लागेकालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने गरेकोले यहाँ सबै पैसामा नै बिक्ने गरेको देखिन्छ । न्यायलयमा पैसाकै चलखेल हुने गरेको प्रसंग कोट्याउँदा नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली विरुद्ध खनिएका न्यायधीश के अब यो सवुद प्रमाणलाई लत्याउँछन् वा आफूमाथि लागेको यस्तो दाग मेटाउनका लागि राजु गोर्खालीजस्ता अपराध जगतका कुख्यात डनहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कानूनको सबक सिकाउछन् यो हेर्न बाँकी नै छ ।
यो पंक्तिकारलाई पनि थाहा छ यो समाचार पढेपछि अदालतको मानहानीमा मुद्दा चल्ने छ । तर मुद्दाको डरले राष्ट्रको चौंथो अंग सावित भइसकेको एक पत्रकारले समाजको यथार्थ र आवाज विहिनहरुको विपक्षमा कहिल्यै र कसैसँग पनि सम्झौता गर्ने छैन ।
गोर्खाली निकटका एक स्रोतका अनुसार गोर्खालीले आपुना सहयोगीलाई आफू पाँच÷छ दिन भित्रमा नै प्रहरी हिरासतबाट छुट्ने र यसका लागि सबै तयारी भइसकेको बताएका थिए । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रहरी पनि डनहरुसँग मिलेका हुन्छन् नत्र अपराधीलाई छोड्ने छैनन् । यसका लागि वा कानूनी राज्यको स्थापनार्थ अब न्यायलय र प्रहरी प्रशासनले गोर्खाली जस्ता डनहरुलाई उन्मुक्ति दिने भन्दापनि कानूनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । यदि यस कुरामा ध्यान पुर् याइन भने गोर्खाली जस्ता हत्याराले अन्य विगो गर्न पछि पर्ने छैनन् । साथै काठमाडौंमा डनहरुद्धारा साचालित अपराध जगतका अन्य खबरको बारेमा खासखबर ब्यूरो लागिरहने छ ।
Posted by khaskhabar at 7:55 AM No comments:
प्रधान सम्पादक : कमलराज राई
सम्पादक : किशोर चाम्लिङ
ब्लग संयोजन : नाकिमा
ब्याबस्थापक : खिलानाथ बस्नेत